Ny Paradox (lesoka) an'ny Safidy. | Avy amin'ny Linux
Arakaraka ny isan'ny safidy, ny tsy fitokisana. Raha fintinina izany dia milaza ny hevitr'ireo mifanohitra amin'ny safidy noforonin'ilay psikology Barry Schwartz ao ny boky mitovy anarana tamin'ny taona 2004.
Araka ny filazany, ny safidy isan-karazany lehibe kokoa dia tsy matetika miteraka fahasambarana, fa ny mifanohitra amin'izay no izy. Raha tokony ho fahatsapana ny fanafahana dia manimba antsika: maro ny safidy azo isafidianana, mampihena ny iray amin'ny fanjakana izany tsy fahatokisan-tena. Ary, na dia resy aza ny paralysisa, dia mahatsapa ny olona iray tsy fahafaham-po firy noho ny toe-javatra mitovy amin'izany izay vitsy ny safidy.
Nofoanan'i Schwartz ny hevitra fa ny safidy lehibe kokoa dia mahasoa, tonga amin'ny fehin-kevitra manjavozavo izay miteraka nenina sy fiandrasana nenina amin'ny mpampiasa, manery azy hanombatombana ny vidin'ny fotoana tsy nahy (maharary ny fanapahan-kevitra rehefa mieritreritra momba izay ianao noterena hametra-pialana) ary mitombo ny fanantenana izay mitarika fahatsapana ho meloka rehefa tsy mifanena aminy (raha misafidy safidy tsy lavorary ny olona iray, miaraka amin'ny safidy maro azo atao, ny tompon'andraikitra dia iray, izay nandray fanapahan-kevitra diso).
Ny psikology dia mandeha hatrany amin'ny fanomezana tsiny ny fihoaran'ny safidy noho ny fitomboan'ny fahaketrahana amin'ny tany mandroso.
Mazava ho azy fa ny olana amin'ny fanjifana dia resahina eto. Saingy mazava ho azy fa azontsika atao ny mampiasa an'io paradisa io hampiharana amin'ny olana maharitra amin'ny fragmentation amin'ny linux. Izy io ihany matetika no tsy raisina ho toy ny paradox fa toy Hadisoana. Miezaka ny diso manamarina ny fandoavana be loatra misy antony miainga amin'ny fahatsaran'ny fahalalahana misafidy ka hatramin'ny "satria afaka manao distro manokana aho ary mizara izany."
Rehefa nandinika aho, ny iray amin'ireo lahatsoratra voalohany miresaka momba ny mifanohitra amin'ny daty isafidianana Septambra 2004 (iray volana talohan'ny nahaterahan'i Ubuntu, saingy fotoana vitsy taorian'ny fanontana ny bokin'i Schwartz). Saingy tamin'ny 2008 no teraka ny tsy fetezan'ny safidy, miaraka amin'i ity hafatra ity ao amin'ny lisitra fandefasana mailaka RedHat nosoratan'i Alan Jackson
> Linux dia momba ny safidy.
Raha mba nanana zavatra iray aho tamin'ity taona ity, dia ny fanesorana izany meme izany amin'ny fahatsiarovan-tena. Aretina io. Manelingelina ny saina izy io ary manome toky anao fa tsy afaka manova zavatra mihitsy ianao satria misy olona any amin'ny toerana sasany manana OCD ny tontolo iainany izay tena itiavany azy ary sahy manova azy ireo ianao dia ratsy toetra ianao ary amin'ny manaraka dia manana namana aho amin'ny Buffy night anao Tsy nanasa an'i Neny aho fa nipetraka teo anilako indray.
Amin'ny maha mpanjifa anao, eny, manana safidy betsaka amin'ny Linux ampiasanao ianao. Tsy midika akory izany fa safidy amin'ny resaka _about_ ny Linux, mihoatra noho ny satria misy karazana fiara maro dia maro azonao vidiana ka safidy ny fiara.
Ny fitarainana momba ny juju sy ny pulse dia mitombina tanteraka, fa ny vahaolana dia ny tsy manandrana manolotra zavatra roa indray mandeha. Raha manandrana manatitra ny roa miaraka ianao dia mila manolotra fomba fifandimbiasana eo amin'izy roa. Ankehitriny dia manana faritra mihetsiketsika telo ianao fa tsy iray, izay midika fa ny tahan'ny tsy fahombiazana dia niakatra noho ny singa _six_ (faritra telo, ary fifandraisana telo). Izahay dia nanipy hevitra fa tsy ampy ny ezaka ataon'ny mpamorona mba hananana endri-javatra feno 100% amin'ny ora an-tsambo, koa ny fangatahana azy ireo handray enina heny ny tahan'ny tsy fahombiazana rehefa efa mihoa-pefy izy ireo dia hadalana fotsiny. Raha tsy izany, afaka nilaza izahay fa mampiditra haingana ireo fiasa, saingy ataonao izany amin'ny fandaniana ny tanjona 1, mba ho fampisehoana ho an'ny rindrambaiko maimaim-poana sy lehibe indrindra amin'ny rindrambaiko maimaim-poana.
Sarotra ny rindrambaiko. Ny fomba fanamboarana azy dia ny manamboatra azy fa tsy mamafa azy eo ambanin'ny karipetra.
Misy ny fifanakalozan-kevitra ara-dalàna tokony hatao momba ny toerana sy ny fomba hanoratantsika ny tsipika fampidirana endri-javatra, momba ny fomba fampitomboana sy fanatanterahana ny ezaka fanandramana, ary ny fomba fampivoarana sy fametahana vahaolana amin'ny zoro toy ny kilasin'ny fitaovana iray Juju mitranga ratsy kokoa noho ny taloha stack. Saingy ny rojika lozika avy amin'ny "Linux dia momba ny safidy" handefasana ny zava-drehetra ary avelao ny mpampiasa hisafidy ny fomba tian'izy ireo tsy hiasa ny feony "dia manomboka amin'ny hadisoana ary miafara amin'ny loza.
Araka ny filazan'ny bilaogy ohjeezlinux, ny votoatin'ny hafatra dia ny namoahan'izy ireo ny Fedora 8, ny famoahana voalohany nampidirina pulseaudio, raha tao amin'ny Fedora 7 dia nampidirina ny stack Juju Fireware.
Samy nanana ny olany izy ireo ary misy ireo nanolotra boaty fanamarinana misafidy ny rafitra audio na ny firaka ataonao. Fa ny olana mipetraka dia ny boaty fanamarinana nampitombo ny asa tamin'ny 3 (ny ampahany tsirairay, asa samy hafa), ary bibikely mety amin'ny 6 (Faritra 3 sy fifandraisana 3). 5 taona lasa izay ………
Nieritreritra ny hanome tsiny ny tsy fisian'ny safidy default ihany koa aho, saingy zavatra izay nanjary sarotra tohina tato ho ato. Nisy lahatsoratra iray tao amin'ny bilaogy haters linux momba ny tsy fisian'ny safidy default KA MIASA IZANY ho an'ny linux amin'ny birao, izay nataon'i Linux tamin'ny mpizara (LAMP) ary izany no nahatonga ny Linux nahomby tamin'ny mpizara.
Saingy amin'izao fotoana izao i Ubuntu dia nanjary io safidy io ho an'ny linux amin'ny birao. Te hanana zavatra ho an'ny Linux ve ianao? Ataovy aloha ho an'ny Ubuntu (Steam, zaza). Mpamily vaovao ho an'ny linux? Andramo ao amin'ny Ubuntu, sns, sns, sns. Steve Jobs tsy Tokony nila namaky ny bokin'i Schwartz aho mba hanao izay nataony, fa mety hanontany izahay (ary afaka maneho hevitra ianao) Inona no mety ho eritreritr'i Richard Stallman momba an'io fifanohitra io?
Na izany aza, lahatsoratra ao amin'ny mybroadband manome fomba fijery hafa. Betsaka loatra ny safidy ho an'ireo izay manandrana Linux voalohanyFa ho an'ireo mpampiasa manana filàna manokana sy tanjona manokana, ny fananana safidy mihoatra ny iray dia tena mahasoa azy ireo.
Etsy ankilany, satria vitsy ny masinina miaraka amin'ny Linux efa napetraka, antenaina fa ny mpampiasa dia manapa-kevitra izay distro hapetraka (ary mihasarotra kokoa izany rehefa tsy heverina ny fametrahana distro karama).
Andao, ny safidy dia tsara ihany ho an'izay tia sy tia azyEnga anie isika hankafy ny zava-misy fa tsy misy fahefana milaza fa tokony hijanona ny distro ary handeha ny distro, raha tsy izany dia ao anaty hadisoana ratsy kokoa isika: ny an'ny olana tsy izy, izay ahafahanao misafidy amin'ireo safidy vitsivitsy (Windows, OSX, GNU / LInux), manilika ireo safidy hafa (BSD, Haiku, OpenSolaris, sns) …………… MOMENTY IRAY !!! Nanamarina ilay be loatra aho. Hadinoy ity fehintsoratra farany ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny Paradox (lesoka) an'ny Safidy.
León dia hoy izy:
Heveriko fa efa manakaiky kely kokoa ny Linux tamin'ny zava-nitranga tamin'ny rindranasa Android sy iOS i Linux: ny tolotra dia maro no tsy sintomin'iza na iza. Ho avy ny teboka iray izay hisy be dia be ny disôro izay hampiasa an'ireo izay nandahatra azy io ary io no izy (raha ampiasan'izy ireo). Milamina ny fahalalahana, fa indraindray kosa mitarika amin'ny teboka tsy misy miraharaha izany.
Valiny tamin'i Leon
Mamaly anao aho fa tena zavatra nitranga tamin'ny fanehoan-kevitra hafa io lahatsoratra io ihany ary na aiza na aiza no nanohina an'ity lohahevitra ity.
Tafalatsaka ao amin'ny dichotomy sandan'ny "Freedom vs. zavatra izay miasa ianao".
Ny fahalalahana dia tsy misy ifandraisany na niteraka zavatra. Safidy maro ary ny CRAP rehetra dia zavatra mety hitranga na tsy misy ny "Fahafahana". Ny antony mahatonga ny olana dia ny tsy fahampian'ny Talent hanao zavatra mandeha tsara ary efa be ny Fitiavan-tena ka tsy tokony hiara-hiasa hamita "asa" samy te hampiorina ny fivarotany ary ho "ilay mahazo voninahitra ».
Raha ny tokony ho izy dia ny "Freedom" no vahaolana, matoa ny tetik'asa tsy feno, misy lesoka na zavatra hafa, mety ho vita sy namboarina niaraka.
Lahatsoratra tena tsara. Nieritreritra koa aho fa ny safidy amin'ny Linux amin'ny tranga sasany dia be loatra, izay indraindray mitarika antsika hivezivezy noho ny tsy fahatapahan-kevitry ny lohateny distro, nitranga tamiko izany.
Tsara fa misy safidy, fa tsy be loatra.
"Tsara fa misy safidy, nefa tsy dia be loatra" ... Tena? Heveriko fa toy ny milaza fa misy "fahalalahana be loatra", avy eo dia tokony hanontany tena ny olona ary iza no manapa-kevitra hoe firy ny safidy azony? ...
Tsy nanazava tsara ny momba ny tenako aho fa ny safidy misafidy distro no tiako horesahina, fa tsy ny fiainana amin'ny ankapobeny. Milaza aho fa rehefa be ny disto azo isafidianana, mila asa ny manapa-kevitra amin'ny iray izay toa "tonga lafatra" ho anao.
Mazava ho azy fa ny fanapaha-kevitra fa be loatra ny safidy na be loatra na tsia dia tena subjectif, izany no mahatonga ny distros be dia be, ohatra.
Amin'ny farany dia mitovy ihany ny fiafarantsika, ny tsirairay dia tokony ho afaka hanao izay tiany, raha mbola tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny hafa izany.
Hitako foana ny loharano misokatra sy ny linux amin'ny ankapobeny ho toy ny tontolo voajanahary sy ny fahaveloman'ny farany mety. Tetikasa izay manana mpamorona mavitrika indrindra, vondrom-piarahamonina lehibe indrindra, afaka mampifanaraka, sy / na manolotra zavatra hafa no ho tafavoaka velona.
Rehefa mampiasa ny fampitahana amin'ny tontolo voajanahary, ny fiparitahan'ny distros dia takatra amin'ny fisian'ny baiko, kaomandy, fianakaviana ary karazana maro dia maro eo amin'ny zavamananaina; Ny mifanohitra amin'ny safidin'ny voajanahary dia tsy milaza ny fahaveloman'ny farany karazan-karazany tokana satria izy no mety indrindra, fa ny fampifanarahana ny tsirairay amin'ny toerany manokana, toy ny mitranga tsy tapaka amin'ny disto: hisy olona maro araka izay ilainy sy tsiro azy. manokana mitaky azy ireo, heveriko fa izany no hatsaran'ny rindrambaiko maimaimpoana, ny fitovizany amin'ny zavamananaina velona.
Tena mahaliana 😀
Malahelo! Heveriko fa izany no fanazavana tsotra sy marina indrindra momba izay tena zavatra novakiako.
Tsy haiko raha azo ampiharina ilay teny hoe "famatsiana be loatra" satria tsy voatery fehezin'ny fitsipiky ny tsena ny fahalalana.
Miresaka rindrambaiko izahay. Toa tsy mety amiko raha tsy ho fantariko ho fahalalana fotsiny.
Eny, marina izany, eritreritra kely fotsiny teo am-pamakiana ilay lahatsoratra. Amin'ny fomba tena tiako ilay lahatsoratra, arahabaona.
Ary… efa manana lohahevitra vaovao horesahina ao amin'ny µkernel xD izahay
Ankoatr'izay, manelingelina ahy ny miresaka momba an'io lohahevitra io satria lalina loatra izany ka hiafara amin'ny fanaovana lahatsoratra iray hafa amin'ity fanehoan-kevitra ity xD
Eny, efa manjavozavo be loatra ka ny Chromium-ko dia mandany fahatsiarovan-tena bebe kokoa foana.
Ny mitovy amin'ilay fandoavana be loatra dia azo ampiharina amin'ny fampahalalana izay misy amin'ny Internet, saingy tsy misy olona amin'ny sainy marina hangataka fanazavana kely kokoa,
Adidin'ny mpampiasa ny manivana ny fampahalalana mifandraika amin'izany, tsy misy manery olona hanandrana ireo disro rehetra misy.
Eny, saingy ny olan'ilay fandaniana be loatra dia voavahan'ny google. Misaotra ny olona google manivana ny fampahalalana diso tafahoatra. Ary tsy milaza zavatra bebe kokoa aho amin'ny tsy nidirako amin'ny adihevitra momba izay ampianarin'i google ary atsaharo ny fampianarany ... amin'ny farany dia aleontsika ny zavatra asehon'ny google amintsika mihoatra noho izay asehon'ny motera fikarohana hafa antsika. Ary tao anatin'ny fivontosana be dia be no nahafantarantsika ny vaovao tamin'ny alàlan'ny zavatra navoakan'ny namanay tao amin'ny facebook / twitter.
Mbola miombon-kevitra amin'izay nolazain'i Alan Jackson ihany aho. Raha nanomboka tamin'ny linux aho (efa 7 taona izao aho) nanana olana tamin'ny feo ary nandeha tanteraka tamin'ny hadalana teo afovoan-dranon'ny alsa, pulseaudio, gstreamer, codecs propriétaires (mp3, divx ...) ary fantatrao hoe inona koa. Tamin'ny farany ny vahaolana dia ny fanavaozana ny solosaina noho ny habetsahan'ny shit napetrako nanandrana namaha ny olana nefa tsy nazava tsara ny fomba fanamboarana ny zava-drehetra.
Mety misy safidy arivo sy iray, ny olana dia misy ONE farafaharatsiny izay miasa ary izany no olana, izay natao handrakofana betsaka nefa tsy nanarona kely aloha.
Lahatsoratra tena tsara ary miombon-kevitra tanteraka amin'ny @res.
Hitan'izy ireo fa tsy mandeha araka ny itiavany azy ny rafitra iray, ary mandefa tsorakazo izy ireo, fa misy lesoka hafa, sns.
Aleo manambatra distros na atokana ho an'ny debugging.
Saingy tsy mora izany. Misy fomba mihoatra ny iray hanaovana zavatra, raha manana hevitra tsy azo ihodivirana ny olona dia hatao. Ny fisafidianana izay làlana tokony horaisina dia tena sarotra.
Marina fa misy fomba maro hanaovana zavatra, ny antsipiriany dia miafara amin'ny fomba maro izay miasa tanteraka ary io no pitsopitsony izay toa misy ilay bara.
MAZAVA IZAO FA MISY SAFIDY BE INDRINDRA, NY VOLA TOKONY HIFIDIANANA ... AMIN'NY SAOTRA ambany kokoa.
Ho azy rehetra dia misy Mac, raha toa ka zakan'izy ireo izany -tsy ny vidiny ara-barotra ihany fa ny tahiry izay iharan'ireo mpampiasa azy- na Windows, ho an'ireo izay tsy manam-bola firy ary tsy maintsy manoritra zavatra madinidinika.
Mac sy Windows dia lafo, am-bifotsy ary PRIVATIVE ary mbola aleony ihany.
GNU + Linux dia MAIMAIMPOANA, MAIMAIMPOANA SY MAMPITAHOTRA NY CURIOSITY SY FAMPIANARANA saingy nolavina izany.
Fehiny: avelao aho hiaraka amin'ireo fanazavana adala nataon'ireo adala ireo ho an'ny adala izay mila manamarina ny adalany mba tsy hampiharihary ny maha-adala azy ireo.
adj.-com Alelado, tsy misy antony.
anarana iombonana Dondrona. Olona mihetsika na miteny mampiseho faharanitan-tsaina kely.
Thorzan dia hoy izy:
msx, mananatra anao aho mba haka fibre kely kokoa. Ary avy eo lazao anay ny fandehany.
Valiny tamin'i Thorzan
Miaraka amin'ny fanehoan-kevitra mahery setra ataonao dia mampidina ny tenanao amin'ny ambaratonga mitovy na ambany kokoa noho ireo olona tsikerainao ianao.
Heveriko fa MSx dia ampahany amin'ny FSF efa lany andro ankehitriny. Noho izany ny endriny dia stallmanesque.
Tsy mahagaga raha faly be daholo ireo mpankafy ... i Steve antitra tsara dia nieritreritra azy ireo ary nanapa-kevitra ny amin'izay ilainy sy ny fomba tokony hampiasan'izy ireo, ah! ary ho an'ireo izay somary marani-tsaina kely kokoa, ny sakaizany Bill dia manolotra safidy Windows maro ahafahan'izy ireo misafidy ilay tsara indrindra, nefa tsy manahirana loatra, sao hiteraka herniation amin'ny ati-doha.
Tsy misy na inona na inona msx, fa voafitaka ny hoavin'ny zanak'olombelona, ​​ary itovizany bebe kokoa amin'ireo biby mpiangona izay mandeha anaty fonosana ary mamerina ny fomba fitondran-tena ho hany famantarana ny "faharanitan-tsaina" ...
MAZAVA IZAO fa misy ny safidy hafa, ny fandoavam-bola bebe kokoa hisafidianana ... ho an'ny ambany kokoa
Fahadisoana voalohany, nanomboka ratsy izahay, tsy misy ambany noho ny tsy faniriana handany fotoana amin'ny fitsapana ny zava-drehetra alohan'ny hisafidianana, mampahonena kokoa ny mandany 365 andro isan-taona fitsapana sy fanovana distros, mampihena tanteraka ny vokatrao.
Alohan'ny hiantsoana olona adala dia ampiharo ny tantara, makà linden ary misento kely alohan'ny hanoratana, ary aza adino ny mieritreritra azy in-4.
Eny, tsy mitombina ny miaina ny fiezahana hahita izay fôsôroza miasa anaty fonosana lena, fa ny olana iray hafa.
Ny trano gilasy dia feno fofon-dranomandry ary tsy misy mandany mandritra ny androm-pifidianana izay iray, na ny menio ao amin'ny trano fisakafoanana, na ny mpivarotra fiara. Ary vitsy kokoa no hanakorontana momba izany raha tsy adala kely ianao na marina ny hypothèse an'i msx.
Ny olana amin'ny Linux dia tsy ny famatsiana loatra, ny mifanohitra amin'izay ny olana dia ny tsy fisian'ny famatsiana satria amin'izao fotoana izao dia tsy misy distro (*) no tena safidy raha oharina amin'ny OSX na Windows; noho io antony io dia miaina tsy fahafaham-po tsy tapaka, mifindra monina na manandrana "izay" ny olona iray, mamela heloka, manjary jamba amin'ny tsy fahampiana, maka rivotra lalina ary mahari-po ... mandra-pahatongan'ny andro iray tsara dia misy olona "matotra", reraka ary "mivarotra" amin'ny OSX na Windows; fa safidy mahasarika izy ireo tsy noho izy ireo "safidy am-bifotsy" fa satria izy ireo dia MPIANATRA, tena izy.
Tsy ny tahotra ny "hihoarana vola" ihany koa ny olana; ny olana dia ny tahotra ny hikarohana mandrakizay ary hanohy amin'ny làlana mety tsy misy farany, na tonga amin'ny famitahana tena ary "hijanona amin'izay misy" "bus farany"; izany rehetra izany dia vokatry ny tsy fisian'ny safidy tena izy.
Na ny olana aza ratsy kokoa, satria ny zava-dehibe dia ny distros rehetra (*) dia saika "zavatra iray ihany" izay misy fahasamihafana mazava (ambonin'izany rehetra izany dia filozofika, na capricious), tombony manaparitaka ary indraindray ny setroka madio, angamba miaraka amin'ny zavatra tsara kokoa noho ny hafa fa tsy hay hazavaina fa manonitra azy amin'ny zavatra ratsy kokoa.
Ao amin'ny efitrano fanaovana gilasy dia azonao fantarina mora ny sôkôlà ary ny frezy, izay ny gilasy ary ny tsiron'ny voankazo tropikaly, mazava ho azy fa misy (sy tena) safidy maro samihafa azo fantarina hatramin'ny fotoana nanolorana azy. Ary raha misafidy izay tadiavinao ianao dia ho afa-po, na mifidy an-jambany aza ianao dia ho afa-po koa satria ny gilasy nofidinao dia "gilasy" ary nahatanteraka izany asa izany; Tsy ho hitanao fa ny zava-manitra rehetra dia ny tsiro voanio ihany no "tena gilasy ... na dia mbola tsy hita aza". Ka na ny fisafidianana tsy kisendrasendra aza dia tonga any amin'ny faran'ny làlan'ny fikarohana.
Miaraka amin'ireo distro dia mitranga toy ny an'ny mpivady izany, raha tsy rehefa afaka manokana ny fotoana ianao vao afaka mahalala azy ary mahazo ny diso fanantenana; Fa ny manodidina ny distros Linux dia faritra ratsy ary ho elaela ianao vao hitady "fitaovam-panambadiana" satria angamba tsy misy na dia iray aza (ary ny olona mahazo an'io karazana "mpifanila vodirindrina" io aza matahotra ary izany karazan-javatra izany amin'ny fifandraisana).
(*) Milaza aho fa distro, fa azo ampiharina amin'ny fampiharana sasany, sns.
Mialà sasatra, ry akama, tsy nisy olona nilaza taminao zavatra ho avy ka manompa toy izany, miantso izay tsy te-hanapoka ny lohany mieritreritra zavatra izay tsy mahaliana azy loatra fotsiny handany ny fotoanany, izay azo ampiasaina ho adala. amin'ny zavatra hafa manan-danja kokoa.
Misy olona manana fiainana, miaraka amin'ny olany sy ny zava-drehetra, ivelan'ny solosaina, fantatrao?
Mpikambana ao amin'ny Free Software Foundation (iray miaraka amin'ireo vavolon'ny GNU) ve ianao?
ny vavolom-belona gnu xDD…, mila mandondona ny varavaranao fotsiny izy ireo, miakanjo akanjo mena mena ahahaah
Amin'izao fotoana izao dia mitranga bebe kokoa izany any Etazonia ary milaza izy ireo fa i San Ignucio no hany mpamonjy azy ireo, ary hofongorany tsy ho eto ambonin'ny tany ny rindrambaiko manana eto amin'ity tontolo ity.
Pandev dia horaisina ho toy ny heretika amin'ny fanekena fa mampiasa Mac izy ary rafitra fiasa tsara izany.
Angamba eo ihany io satria kely dia kely izao tontolo izao ary miaraka amin'ireo Vavolombelona Panda ary ny Tux Taliban dia tsy nisy toerana ho an'ny olon-kafa.
Sa ve ianao tsy voadona am-baravarana avy amin'ireo olona izay mampanantena ny hanavotra izao tontolo izao amin'ny ampihimamba Microsoft / IE Closed Software ampihimamba sy hanavotra izao tontolo izao / Internet miaraka amin'ny fiderana an-tsehatra ataon'ny the Mesias Tux, Linus Torvalds / Open Panda miakanjo Akanjo volomboasary sa volondavenona? Ary mitandrema raha mampiasa Windows / OSX / Chrome / Opera ianao satria handoro anao ny mpitsidika "openmind" an'ny Tux / sns, ary aza mieritreritra ny hiteny hoe tsara kokoa izy ireo.
Azafady, ireo manana fitondran-tena ihany ny miteny sy manambany toy izany ny vahoaka Windows; fa ny zava-drehetra manodidina ny Linux, Source Open, rindrambaiko maimaimpoana sns dia voaloton'ny azy tantara voaray tsara feno fanatisme ara-pinoana Taliban mampianatra evanjelista.
Na iza na iza afaka amin'ny ota, atsipazo ny vato voalohany… Ary ny olona ao amin'ny Windows ihany no afaka mitora-bato… noho izany dia oram-bato.
Tsy ny olon-drehetra no tia solosaina na manam-potoana handehanana hanandrana ireo disro rehetra misy sy hanana
Heveriko fa fahadisoana ny fampifangaroana ny fividianana entana na serivisy ho an'ny mpanjifa sy ny safidin'ireo fitaovana rindrambaiko. Tsy miditra amin'ny etika na fiaraha-monina izany. Afaka mahazo aina amin'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa iray aho fa tsy amin'ny iray hafa. Moa ve izany tsy maintsy dinihin'ny psikology koa?
Mizarazara ihany koa ireo fiteny fandefasana fandaharana ary "tsy misy mandeha manome cu ** amin'ilay lohahevitra rehetra mahamenatra" Azafady ny fitenenana saingy nanomboka ny taona 1999 aho dia nihaino zavatra iray ihany ary tsy maninona ny olona an-tapitrisany no mampiasa azy.
Ny rindrambaiko maimaimpoana dia tsy iharan'ny lalàna kapitalista amin'ny fanjifana ary tsy ampy ny fomba fijery amin'ny fotoana hanazavana ny zava-mitranga ankehitriny. Ao anatin'ny 100 na 200 taona dia ho afaka hanana hevitra momba ny dikan'izany ho zava-kendrena bebe kokoa noho ilay ananantsika isika izao, samy hisintona amin'ny sisiny avy.
Ny zavatra misara-javatra dia matetika fialan-tsiny mora vidy avy amin'ny orinasa izay tsy te-hametraka sehatra ny vokatra na avy amin'ny microsoft iray ihany.
Mazava ho azy, ny lozisialy maimaim-poana dia tsy iharan'ny kapitalisma, satria ny rindrambaiko maimaimpoana dia mihevitra ny rindrambaiko ho zavatra misintona fa tsy toy ny hoe zavatra mivaingana (tsy azoko ny antony hametrahana ny vidiny amin'ny lisansa amin'ireo zavatra izay tsy tena azonao kasihana, ary ambony, tsy tsara kalitao). Ho fanampin'izay, tsy noho ny kalitaon'ny fitaovana, fa momba ny fomba hampiasa azy io.
Heveriko fa mba hitazomana hatrany izay voalaza mandritra ny lahatsoratra, ity fehintsoratra ity:
Raha tsy izany dia ao anaty hadisoana ratsy kokoa isika: ny dilemma diso, izay ahafahanao misafidy amin'ireo safidy vitsivitsy (Windows, OSX, GNU / LInux), manilika ireo safidy hafa (BSD, Haiku, OpenSolaris, sns.)
Tokony ho nilaza
Raha tsy izany, ao anaty hadisoana ratsy kokoa isika: ny olana tsy marina, izay safidy tokana (Windows, OSX, Ubuntu) ihany no azonao atao, manilika safidy hafa (distro Linux hafa, BSD, Haiku, OpenSolaris, sns.)
Hatramin'ny ambony dia voaro ny Linux mifanentana dia tokony manandrana mankany Ubuntu (... ary ny ambiny rehefa lavo).
bxo dia hoy izy:
Mino ny tontolon'ny Gnu / Linux amin'ny fisafidianana safidy aho, avy eo ny fahatsapako fa tsy mety izany ary ny fitaintainanana dia tsy mety loatra.
Raha atao teny hafa, dia misy dikany, ohatra, rehefa mividy fiara ary avy eo mahatsapa fa mampiasa solika be dia be izy, na dia tsara tarehy kokoa noho ny safidy hafa aza izy io, dia tsy mahasoa izany, ary raha amidinao hividianana ilay iray hafa dia hahafoana vola sy fotoana be dia be ianao. Fa raha manandrana distro linux ianao ary tsy maharesy lahatra anao, dia azonao ovaina amin'ny hafa tsy misy aretin'andoha be loatra sy ny zavatra tsara indrindra na dia tsy nijanona tamin'ny distro voalohany aza ianao dia ho hitanao ny hatsarany sy ny lesoka ao aminy, ankoatry ny fiovan'ny fianarana ny takalony, raha sendra indray andro any mifanaraka tsara amin'ny zavatra ilainao na olona mangataka torohevitra aminao
Mamaly an'i bxo
Ahoana anefa raha olona be atao be aho ary tsy mahay mandinika diso, ahoana no anaovako azy?
Mitadiava tranokala izay manome soso-kevitra momba ny distro na olona nanandrana ny disto fanta-daza rehetra ka tsy mila sorona ny hoditrao amin'izay tsy mila mandany fotoana manandrana distro iray sy iray hafa.
Ireo tranokala rehetra ireo dia matetika no mamporisika ny ubuntu fotsiny….
Eny, manoro hevitra an'i Mint aho mba tsy ho very ny windowsers ary tsy hahazo baolina be eo anelanelan'ny Ubuntu sy Debian izy ireo.
Ao amin'ny GNU / Linux, misy diso isaky ny karazana olona nananganana azy. Raha ny amin'ny sarambabem-bahoaka dia mazava ho azy fa ny malaza indrindra dia ny Ubuntu, satria mifantoka amin'ny fitantanana sary 100% izy fa tsy amin'ny ambaratonga console (ary efa nanandrana aho). Soa ihany, misy ny fanatsarana ny kinova Ubuntu toy ny Mint izay tena mandeha tsara na amin'ny console na amin'ny ambaratongam-tsary.
Raha ny momba ny diako namakivaky ity tontolon'ny GNU / Linux ity, dia tsy maintsy lazaiko fa ny distro voalohany nanombohako dia ny Mandrake 1, izay tsara fa naharikoriko tanteraka ny fanodinana ireo fonosiny. Ny manaraka dia i Debian, izay lavitra ahy hatreto ary nahatsapako aina kokoa noho ny Ubuntu.
Izao dia mizaha toetra distro hafa toa Slackware sy CentOS aho (mandeha ny paranoia) mba tsy ho zotom-poza ho distro tokana, miampy manome fahitana tsara kokoa ahy momba ny tontolon'ny GNU / Linux any.
Angamba ilaina ny manontany tena hoe inona no hitranga raha tsy misy afa-tsy safidy tokana ary ny fahafaha-misafidy dia an'ny mpampiasa manokana.
Raha ny hevitro amin'ny maha-mpampiasa ahy dia tiako ny manandrana zavatra vaovao sy samihafa izay manova ny traikefa amin'ny fifandraisana amin'ny rafitra. Tsy mino aho fa misy safidy maro kokoa manototra ireo mpampiasa vaovao amin'ny tsy fahatapahan-kevitra, satria amin'ny ankapobeny dia miditra amin'ny tontolon'ny Linux izy ireo avy amin'ny distro malaza sy ny tontolo iainan'ny be mpampiasa toa ny KDE, Gnome, Xfce, sns.
Betsaka ny fiasa ary tsy misy miasa -.-
Miala tsiny fa maro ny safidy ary tsy misy manana mpilalao horonantsary mendrika na tonian-dahatsoratra
Tsy misy mpilalao video mendrika ?? VLC sy mplayer tsy mitovy hevitra.
Ary mitaraina matetika fa ny maro an'isa tsy manao fanomezana na mitatitra bibikely na zavatra hafa.
VLC dia tsara amin'ny maha-mpilalao horonantsary azy, fa ilay mikapoka an'i Gimp dia i Krita noho ny fitoviana manaitra ny Photoshop.
Ekeko fa tsara kokoa noho i Gimp i Krita, saingy tsy satria mitovy amin'ny P $ fa noho ny fikirakirany loko tsara kokoa (CMKY, 16 bit isaky ny lok, sns.), Zavatra iray izay efa ampiharin'i Gimp ary raha vantany vao vonona dia handresy indray Ho an'i Krita, hoy aho raha vitan'izy ireo ny mandray ny GEGL sy ny GTK + 3 (toa tsy misy farany ny fiandrasana).
Krita dia tsara satria natao ho an'ny famolavolana sary manokana. Ankehitriny, ny zavatra tsy ho hitany dia manatsara ny fitaovany ny GIMP ka mora ampiasaina ary afaka manohana ny fanontana.
Amin'ny ahy, afaka miresaka zavatra mivaingana aho. ´Manana aho, noho ny solosainako, fihenan-danja amin'ny fizarana azoko ampiasaina, ary tena malahelo azy aho. Ny laptop-ko dia feno panoramic fa miaraka amina carte graphique misy ireo manana ny haitao Optimus. Ny zava-misy dia ny fizarana ny fianakavian'i Debian ihany no mahalala ahy endrika panoramic mety (ny sisa tavela tamin'ny 1900 × 1080; tsy azo ampiasaina izany; miaraka amin'ny xrandr maody maro kokoa no azo vokarina, nefa izany dia manome olana foana). Ka amin'ny farany dia malahelo aho afaka mampiasa sy mizaha fizarana bebe kokoa. Amin'ny zavatra rehetra hatramin'ny nanamarihako fa tsy manomboka ahy intsony i Debian 7, ary manana Ubuntu sy derivatives fotsiny aho.
Noho izany dia malahelo be amin'ny safidin'ny fizarana aho.
Manana Asus N73 miaraka amin'ny teknolojia Optimus aho ary miasa tsara amin'ny Debian 7.
Mametraka Bumblebee avy amin'ny repositories an'i Debian aho ary mampiasa Arandr ho an'ny fampisehoana roa (tsy voatery nanova vahaolana na mampiasa xrandr na zavatra hafa aho) 1600x900.
Mampiasa ny birao XFCE aho ary ankoatry ny programa web sy python dia ampiasaiko tsara tanteraka ilay efitrano famolavolana iray manontolo: Gimp, Inkscape, Scribus ary Blender.
Lazao anay bebe kokoa momba ny olanao ary angamba afaka manampy anao amin'ny forum izahay.
Te-hamaky hevitra iray aho na lohahevitra fotsiny izay tsy ifanarahan'ny olona am-panajana nefa tsy tafiditra ao anatin'ny klise, ompa, fampitahana ary fitsarana an-tendrony amin'izao fotoana izao, mahafinaritra ny mahita ny mamaky hevitra nefa tsy mitondra ny ompa ataon'ireo mpampiasa hafa noho ny fitenin'izy ireo kely. mifanentana, feno lohahevitra tsy manara-dalàna izay mampivily antsika amin'ny lohahevitra, sns, sns
Na eo aza izany, alohan'ny hamaliana, mieritrereta, mandiniha ary avy eo mampiseho
Ny hany fiteny tsy mendrika nampiasako, nifona, izay tsy manafaka ahy amin'ny heloko. Inona avy ireo fanehoan-kevitra ao amin'ity kofehy ity manevateva na manavakavaka? Inona ireo fitsarana an-tendrony izay tianao holazaina?
Tsotra ny fanontaniana, satria natosik'i Red Hat ampahibemaso ny Linux, ary taty aoriana dia nanomboka nanohana an'i Linux ny IBM sy ny orinasa sy fikambanana matotra hafa (miresaka momba ny 15 taona lasa izay isika) nampiasa ny adihevitra fa ny safidy isan-karazany dia lesoka ho an'ny mpampiasa sy ny orinasa, hatrany hatrany (ankoatry ny hafa) ho lohahevitra.
Olombelona manolo-tena isika ary manelingelina antsika io karazana fihetsika io. Ny mpampiasa sasany, izay mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina toa an'i Gimp-es, Gnome-Hispano, Hispalinux, Gleduc-ar, ary koa mandray anjara amin'ny tontolon'ny asa mifototra amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ary mandray anjara amin'ny tetikasa samihafa, dia voadinika tamin'ity fanontaniana ity nandritra ny taona maro ary leo ihany isika amin'ny sehatra manokana, satria ny rindrambaiko maimaim-poana sy Linux dia namboarin'olona ary manana fahatsapana izahay.
Orinasa lehibe mitsiky fotsiny ireo orinasa lehibe ary toa tsy misy fiantraikany amin'izy ireo. Na dia ao aorinan'izy ireo aza dia nanararaotra ny mpiasa mieritreritra fa miaina amin'ny tontolo mety izy ireo satria manana latabatra fisakafoanana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny birao.
Aza esorina ny fahaizana tezitra amin'ny fianjerana sy lainga raraka, satria izany dia hanova ny fiarahamonina ho zavatra tsy miandany na aseptika.
Mangataka an'i Linus Torvalds tsy hanoro an'i Nvidia ny rantsan-tànanao ve ianao? (Tsy te hampitaha ny tenako amin'i Linus afa-tsy ny maha olombelona antsika roa)
Fanamarihana tena tsara
Azonao atao ve ny mangataka an'i Linus Torvalds mba tsy hampiseho an'i Nvidia ny rantsan-tànana? (Tsy te hampitaha ny tenako amin'i Linus afa-tsy ny maha olombelona antsika roa).
Ao amin'ny fivavahan'ny Linux dia misy fenitra / fitondran-tena avo roa heny arakaraka ny tranga, iray ho an'ny andriamanitra ary iray ho an'ny ambiny.
Salama @Ares, azonao atao ve ny manome ohatra iray rehefa nampiasa fenitra roa sosona?
Raha nanamarina zavatra teo amin'ny fiaraha-monina aho dia ilay mendrika hisongadina amin'ny tombony azony ho an'ny rehetra. Ratsy ve izany? Na izany aza, omena lanja foana ny vondrom-piarahamonina iray manontolo, manomboka amin'ilay mandray anjara kely ka hatramin'ny mandray anjara betsaka.
lahatsoratra tena tsara, mahaliana.
mss-devel dia hoy izy:
Somary mahantra ny fifamaliana, ary tsy miraharaha zavatra maro. Ny fivoaran'ny rindrambaiko tsy miankina dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny sehatra samihafa, hatramin'ny fanabeazana ka hatramin'ny fialamboly. Zon'ny olona rehetra ny manao distro manokana. Ny rindrambaiko maimaimpoana dia nanome ny mpampiasa ambaratonga namboarina manokana, izany no antony ankafizin'ny indostria maro samihafa. Ary tsy ny distro rehetra no ilaina amin'ny mpampiasa rehetra. Ary ahoana ny amin'ny fizarana toy ny Scientific Linux? Ary koa, io mpanoratra io dia manana fomba fijery efa lany andro. Miova be ny toekarena manerantany; misy tsena vaovao, serivisy vaovao, endrika fifandraisana vaovao. Tena tsy mankasitraka ny "overupply" aho, rehefa mamela ny famatsiana ankehitriny ho lany andro sy tsy ampy ny fanatontoloana.
Valio ny mss-devel